Izilwane zithinta kanjani futhi zizivikele ekushiseni? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngaphezu komkhawulo othile wokushisa, izinto eziphilayo zikuthola kunzima ukusebenza. Ochwepheshe bakwaWWF (World Wide Fund for Nature) bayakuxwayisa lokhu, futhi nabo bangafa. Ukushisa okuphezulu okuthinta abantu kakhulu, kuthinta nezilwane. Ngokuya ngohlobo nokuthi luhlobo luni, izinguquko ziqala ukuqashelwa. Singathola kusukela ekunciphiseni kokukhiqizwa kwemfuyo kuye ekunciphisweni kwabantu bezinhlobo ezibucayi kakhulu.
Kubuye kuthinte nezimbali, ukushisa okweqile, futhi okuhambisana nemvula encane, kubangela isibonelo ukuthi izimbali zome. Izinyosi azikwazi ukukhiqiza umpe omningi. Ngezikhathi ezinjengalezi, lo mkhiqizo uyehla. Ngesikhathi samahora okuqala osuku, bangazinikezela ekuqoqeni umpe. Ngemuva kwalokho, kufanele basishiye, bapholise isidleke ngamanzi bese basigcina phakathi kuka-32-35ºC.
1 Izithinta kanjani izinyoni?
2 Bazivikela kanjani?
3 Izithinta kanjani izilwane ezihuquzelayo?
4 Izithinta kanjani izinhlanzi?
Izithinta kanjani izinyoni?
Igagasi lokushisa ngenkathi lapho kukhona khona okuzalayo, kubangela ukuthi izinhlobo ezikhulisa amaphuphu azo zikuthole kunzima ukuthola amanzi. Ngabaphuzi abambalwa ababikezelayo, kubangela ukwanda kwamandla okufuna amanzi amaningi futhi uyihambise kalula. Lokho kunomthelela oqondile enanini lezinkukhu ezisindayo.
Kuyabonakala futhi ukuthi izinyoni ezixhumene nezindawo ezinotshani, ngokwanda kwamazinga okushisa, aziluhlaza kangako. Ukukhiqizwa kwezinyoni kuyawa, futhi ngokufana futhi nezinyoni ezidla izinambuzane. Lezi zokugcina zihlobene nenani lezimbali ezikhona.
Ngakolunye uhlangothi izinyoni basebenzisa izimpaphe zabo njengesiphephetha-moya. Kuyindlela ejwayelekile kakhulu ezinhlotsheni eziningi. Isibonelo, abantu basebenzisa izinwele zethu njengeziqandisi kancane ehlobo, ukuze izinga lokushisa lingabi phezulu kakhulu. Ngokulinganayo nangokuzibonela iyasivikela emakhazeni ebusika.
Izinyoni zasemadolobheni zinethuba elingcono lokusinda ezindaweni ezisemadolobheni. Ngokuvamile kunezindawo ezinokudla namanzi njalo, njengaleyo esetshenziselwa ukunisela. Lokho kwenza kube lula ngabo ukuchuma. Indlela enhle yokusiza ukunciphisa imiphumela yokushisa ezinyonini ukubeka abaphuzayo noma izimbiza zamanzi.
Ngokuvamile, izilwane zisabela ekushiseni ngendlela efanayo nabantu. Behlisa ijubane lomsebenzi wabo, bafune ukuphephela emthunzini, bese kuvela izinkinga zemetabolism emazingeni aphezulu okushisa. Kukhona okunye futhi, kanjani izinja, ezizwela kakhulu ekushiseni kunokuba sicabanga. Njengoba bengenawo amandla okujuluka ukuze bazipholise, siyabona ukuthi balala kanjani phansi befuna okupholile, ngenkathi behefuzela.
Izithinta kanjani izilwane ezihuquzelayo?
Kubo sithola ukuthi, kusuka cishe ku-32ºC centigrade kuyabathinta ocansini lapho bezala kabusha. Lokho kusho ukuthi, kuzalwa abesifazane abaningi. Ibhalansi evame ukuba khona phakathi kobulili bobabili iyashintsha.
Ziyizilwane ezi-ectothermic, azikwazi ukukhiqiza ukushisa kwazo. Njengasemazingeni okushisa aphansi, ukusabela kwabo kokunciphisa umzimba kuyehla futhi izinga lomsebenzi wabo liyehla, bayazwela emazingeni okushisa aphezulu. Esimweni esinjalo, ukusabela kwamakhemikhali kwaphuma ebhalansi nomsebenzi wamaprotheni abandakanyeka kuwo, ama-enzyme, uyashintshwa noma ungancishiswa.
Izithinta kanjani izinhlanzi?
Lapho izinga lokushisa kwamanzi likhuphuka, bavame ukuthuthela kwezinye izindawo. Izinyoni zasolwandle, esingakaze sisho ngaphambili, ngokwesibonelo yibo abalimele lapha. Ukuze bafune ukudla, ngokuvamile kudingeka bahambe amabanga amade. Futhi kuthinta nokugqokwa kwabo komzimba kanye nokudabuka ezinganeni zabo.
Endabeni yezinhlanzi, yizilwane ezivame ukuhlala emazingeni okushisa azinzile kakhulu. Emvelweni womoya izinga lokushisa liyahlukahluka kakhulu, kepha endaweni yasemanzini ukwehluka kuzinze kakhudlwana. Ngakho-ke, uhlobo ngalunye "lunendawo yalo." Sinezinhlanzi ezithile ezingaphila emanzini aneqhwa esigxotsheni, kanti ezinye emanzini ashisayo kakhulu. Kepha ukwehluka kwamazinga okushisa emanzini alo kuzothinta ngqo inani labantu. Uma bengathola isiphephelo kwenye indawo, ngokuhlukile, noma yikuphi ukukhuphuka noma ukwehla kwamazinga okushisa kubangela ukuthi inani labantu labo lehle kusuka ezingeni lokushisa elifanele.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Amagagasi okushisa » Izilwane zithinta kanjani futhi zizivikele ekushiseni?